I-HTC yenza ilahleko kwakhona kwishishini layo le-smartphone | I-Androidsis
I-HTC iyaqhubeka nokuvelisa ilahleko kwishishini layo le-smartphone
Imeko yeHTC ibintle ixesha elide, into esele siyazi. Ikhampani Kwavalwa kwakhona kunyaka ophelileyo ngelahleko. Ukusombulula imeko embi abatyhubela kuyo, inkampani iyayiqwalasela ilayisenisi yophawu lwakho kwezinye iimarike, nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho nto yenzekileyo. Ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, bekungekho fowuni ivela kwinkampani.
Nangona kubonakala ngathi kukho into eyenziwayo kwezi veki, kuba a Ifowuni yoluhlu oluphakathi lwefowuni igqithile eGeekbench. Ngeli xesha, Ishishini le-HTC le-smartphone liyaqhubeka nokwenza ilahleko oosozigidi, ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka. Ngapha koko, sele benze imali eninzi ngokwahlulahlula inyani ngokwenyani.
Kuphela ngo-Matshi walo nyaka babenokuphumla kancinci, kunye namanani awayenethemba elithile, kumanani amabi eli candelo leefoni. Kodwa ngenyanga ka-Epreli, izinto zibuyele kwinto ebonakala ngathi yeyesiqhelo imeko yenkampani, neziphumo ezibi kunye nelahleko kaosozigidi.
Ingeniso ye-HTC ka-Epreli yayijikeleze i-17 yezigidi, ukwehla kwe-71,77% xa kuthelekiswa nenyanga enye kulo nyaka uphelileyo, ukongeza ekubeni yehle nge-55% xa kuthelekiswa neziphumo zikaMatshi. Inkampani ngokwayo ibiphethe ukuveza ezi ziphumo ngokusemthethweni. Into evelise intelekelelo eninzi.
Kuba kukho imithombo yeendaba ngoku ekhomba kwi-HTC phuma kwishishini le-smartphone kungekudala. Nangona eli lihlebo eliye kwiimarike iinyanga. Kodwa kude kube ngoku, inkampani ibicacisile ukuba ifuna ukuqhubeka nokusungula iifowuni. Nangona ngo-2019 singenazo iindaba zeefowuni ezintsha kubo.
Okucacileyo kukuba imeko yabo ayizinzanga, nangona beqhubeka nokufuna ukuhlala kwintengiso apho kucacile ukuba abasenawo umsantsa. Ke, Kubonakala ngathi ayinakuphepheka ukuba i-HTC iyakushiya eli candelo lee-smartphones. Into esingayaziyo okwangoku kukuba iya kwenzeka nini le nto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » I-HTC iyaqhubeka nokuvelisa ilahleko kwishishini layo le-smartphone
I-ZTE Axon 10 Pro 5G iya kufumaneka kwintengiso kwesi siqingatha sokuqala sonyaka
IGolden Fold ayinawo umhla wokukhutshwa ngokweSamsung